OpenSUSE Tumbleweed dị njikere ibudata Rolling Release | Site na Linux
Nke ọhụrụ apụtala OZI 13.2, ma nke ahụ abụghị ihe niile dị ọhụrụ banyere SUSE. Site na igba egbe a, ohuru Rolling Hapụ site na oku OpenSUSE Akwụsịtụ na Factory ga-anọgide na-abụ distro maka ịga n'ihu mmepeSUSS.
Ebee ka m ga-ebudata emegheSUSE Tumbleweed si?
Site na njikọ anyị na-ahapụ n'okpuru:
Budata OpenSUSE Tumbleweed
N'oge ahụ ihe oyiyi maka Factlọ ọrụ na-aga n'ihu na-egosi na njikọ enyere, mana ụbọchị ole na ole ọ ga-adị n'okpuru aha Tumbleweed. Ekwesiri ighota na ndi jiri ulo oru ha nwere ike iga Akwụsịtụ na-enweghị ịtinye ọzọ. Ozugbo arụnyere, ị ga-agbanwe ebe nchekwa (ozugbo ọhụụ ọhụrụ pụtara, ha agakwaghị adị mkpa).
Gaa maka ya.
Mepee ọnụ ma na-agba ọsọ dị ka mgbọrọgwụ:
Anyị na-emelite distro:
Na njikere :). Ha nwere Tumbleweed ha.
Ozi ndi ozo: http://en.opensuse.org/Portal:Tumbleweed
Anyị nwekwara ike ịgbakwunye ebe nchekwa Packman ozugbo emelitere nkesa (akwadoro):
ma melite ihe niile na:
zypper zypper wụnye-ohuru-na-atụ aro zypper dup
Ekele sitere na Linuxeros :).
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Nkesa » OpenSUSE Tumbleweed njikere ibudata The Rolling Hapụ !!!
Ihe niile ị na-ekwu maka "ụtọ" dị iche iche nke OpenSUSE bụ eziokwu ruo n'oge na-adịbeghị anya. Tubleweed na Factory bụzi otu ihe ahụ. Amaghị m ma ọ bụrụ na nchekwa Tubleweed na-arụtụ aka na ụlọ ọrụ ma ọ bụ ụzọ ọzọ.
Ijikọta alaka abụọ ahụ bụ mkpebi ndị otu SUSE mere n'oge na-adịbeghị anya.
Eeh, mana ha tụgharịrị ya ebe ọ bụ na amaara aha Tubleweed nke ọma. Emegharịrị ọrụ Tubleweed ka ọ mere otu ọnwa na ọkara gara aga na orylọ ọrụ na 4.11.2014 ọhụrụ Tubleweed repo na iso gụnyere pụtara. Ọ bụghịzi naanị repo dị ka ọ dị na mbụ. Lọ ọrụ ga-abụ naanị maka mmepe mmepe ya mere ọ ga-ejighị n'aka. Ọ bụ ụbọchị 2 ụbọchị ozi.
Ozi ndi ozo: http://es.opensuse.org/Portal:Tumbleweed
Ndewo enyi, ị maara na m nwere ajụjụ, site na ihe m gụrụ, mbipute nke ụlọ ọrụ na-emepe emepe ga-akwụsi ike, ntọhapụ na-agagharị na tumbleweed ga-apụ n'anya ebe ọ ga-abụ otu ihe ahụ na ụlọ ọrụ ...
Kedu ihe dị iche ugbu a n'etiti ụlọ ọrụ mmepụta ihe na tumbleweed?
Zaghachi David Pineda
Ndewo @ David Pineda,
Kemgbe Nọvemba 4 ka naanị ihe a na-apụ na OpenSUSE bụ Tubleweed. Ezubere ụlọ nrụpụta ọrụ maka mmepe nke distro yabụ na ọ naghị akwụsi ike maka iji ya kwa ụbọchị.
Ebe ọ bụ na November 4, Tubleweed Rolling e n'otu na Factory Rolling, na-ahapụ naanị Tubleweed Rolling na ọ dịghị Factory Rolling.
Ha tinyere ya n'ọkwa ọkwa gọọmenti.
»Na Nọmba Nọvemba 2014, XNUMX, thelọ ọrụ mmepụta ihe na nsụgharị Tumbleweed na-agbagharị nke OpenSUSE ka ejikọtara ọnụ n'otu otu OpenSUSE Tumbleweed Rolling Call.»
“Onye ọ bụla nke na-eji ụlọ ọrụ OpenSUSE na openSUSE Tumbleweed tupu Mee 2015, 2015 kwesịrị ịgbaso ntuziaka na ibe a. Ndị ọrụ Tumbleweed ga-eme nke a ozugbo iji gaa n'ihu na-enweta mmelite. Ndị ọrụ ụlọ ọrụ ga-eme nke a rue Mee XNUMX, XNUMX. "
Ozi ndi ozo: https://en.opensuse.org/SDB:Tumbleweed_Merger
Daalụ Petercheco. Agụ m ikwu, ihe niile na-akpali emewo ka o doo m anya.
Ugbu a Tumbleweed bụ ihe e jiriburu na-abụ Nnwale Ọha nke orylọ Ọrụ. Ma, Tumbleweed ka bụ akụkụ nke ọrụ ụlọ ọrụ mmepụta ihe, ya bụ, ọ ka bụ nsụgharị zuru oke, yabụ ị ga-ahụ ụfọdụ chinchi. Projectlọ ọrụ mmepụta ihe na-ekpuchi: Tumbleweed, Factory to-test, openqa na ọrụ niile dị iche iche ebe emepe OpenSUSE, tinyere ihe ndị ọzọ.
Jos Poortvliet na Richard Brown kọwara gị nke ọma: D.
Agara m ebe a na-edebe Tumbleweed dị ka ntuziaka ndị a dị ebe a ma ọ dị ka ọ kwụsiri ike, gụnyere ndị ọkwọ ụgbọala maka eserese Nvidia ochie m. Ajuju m nwere bụ ma ọ bụrụ na m ga-enwe ike itinye nchekwa nke m nwere na mbụ. Echere m na ihe kacha sie ike nghọta na SUSE bụ okwu banyere nchekwa na ihe kacha ha mkpa. Ugbu a ọ bụrụ na ị wụnye ihe, ọ dị ka ọ bụ ebe nchekwa a na-esite na ya na-ebudata ihe ntanetị: "Mepee SUSE-20141102". Ihe niile na-arụrụ m ọrụ ma ewezuga Audacious, yabụ Achọrọ m ịhapụ ya ka ọ dị. Eziokwu bụ na maka ọhụụ ọhụụ ihe a niile bụ ezigbo ọrịre, mana echere m na maka kọmputa m ihe kachasị mma bụ ịnwepụta Ntugharị Rolling na anyị ga-ahụ etu o si eme n'ọdịnihu.
Daalụ maka onyinye gị Peter na-ekele gị
Ndewo, site na ntinye nke ndị ọzọ, ị nwere ike ịwụnye ha ebe ọ bụ na ha niile nwere Tumbleweed ma ọ bụ ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ ha. Na mkpokọta, naanị ị ga-achọ ntanetị maka ngwanrọ software.opensuse.com maka ngwungwu ịchọrọ ma repo tinye ga-apụta.
Tumbleweed = Ịgbagharị
Factory = Ezi Rolling?
Tumbleweed = Ule
Lọ ọrụ = Sid
(ọ bụrụ otu a ka o siri doo anya)
Daalụ maka inye m amamihe gị.
N'ụzọ doro anya, "inwe (sic) ee (sic) n'ihi ya, o doro anya na ọ ga-adị"
Lọ ọrụ bụ ọrụ, ọ bụghị nhapụ dị ka nke a. Tumbleweed. ugbu a, ọ banyere ihe ga-abụ orylọ ọrụ, ọ bụ ụdị ụlọ nrụpụta nke onye ọ bụla nwere ike iji, ebe ọ gafere ọtụtụ ule. Tupu Tumbleweed enwere Factory-to-test na n'ihu ọtụtụ ọrụ dị iche iche. Yabụ ọrụ ndị a mechara kwụsie ike, gbakọta ọnụ wee mepụta orylọ ọrụ na-anwale, nke ga-eme Tumbleweed mgbe ule ahụ mechara OpenQA. Ọ bụ n'ezie ihe mgbagwoju anya karịa nke a, mana akọwapụtara ya nke ọma na ibe OpenSUSE
Naanị m ga-ewepụ orylọ ọrụ ma wụnye Manjaro n'ihi na sistemụ jupụtara na ọnọdụ okpomọkụ m .. Enwere ụzọ iji wepụ kpam kpamSUSE system na-asọ oyi ma tinye openRC ma ọ bụ ihe ọzọ?
Manjaro na-eji systemd…
Mana opekata mpe i nwere ike wepu ya ma tinye ogheRC oo
N'iso ntuziaka gị, ugbu a OpenSUSE 13.2 m na-arụ ọrụ Ọ dị mma, ma na-enwusi ọkụ, ya na ebe nchekwa Tumbleweed.
M na-emelite n'ụzọ a kọwara ebe a ka m na-echere ebe nchekwa ikpeazụ.
Agbanyeghị, na Yast> Ihe ntinye akụrụngwa, ihe nchekwa ndị na - esonụ:
Nwere ike ịkọwapụta ụdị ụdị nchekwa nke a bụ ma ọ bụrụ na ọ bụ ebe nchekwa nwa oge na-agafe agafe?
Daalụ maka ozi na ekele
Ee, nke a bụ ebe nchekwa maka ngalaba Tumbleweed dị ugbu a ... Ha tinyere ya na ụbọchị ịhapụ site na foto ikpeazụ :).
ga-emepe Tumbleweed ọnwa anọ ka ahapụchara mbipute ya
ahụhụ, okuku na ndozi ndozi mmelite
eji eji ebule eme ihe
ndozi maka akụrụngwa, ngwanrọ na mmemme